Princess Cruises Emerald Princess laghachiri ọrụ na USA
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịtụ egwu » Princess Cruises Emerald Princess laghachiri ọrụ na USA
Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Princess Cruises Emerald Princess laghachiri ọrụ na USA.
Ụgbọ mmiri Princess Cruises na ụgbọ mmiri Emerald Princess dị maka ndị ọbịa natara ọgwụ ikpeazụ COVID-19 akwadoro opekata mpe ụbọchị 14 tupu mmalite njem ụgbọ mmiri ma nwee ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ nabatara ndị ọbịa Emerald Princess mbụ.
Emerald Princess ga -abata na Ft. Lauderdale na Ọktọba 30, 2021 ma ga-ebugharị usoro njem ụgbọ mmiri Panama ụbọchị iri, nke si Ft gafee. Lauderdale site na Disemba 10.
Mgba ọgwụ mgbochi ndị ọrụ Emerald Princess dabere na ntuziaka CDC.
Ụgbọ mmiri si n'ọdụ ụgbọ mmiri Los Angeles na njem ụbọchị Panama Canal Cruise, Emerald Princess laghachiri ọrụ wee nabata ndị ọbịa mbụ.
Emerald Princess na -enye Oge ezumike MedallionClass, na -ebuga ndị kacha n'atụghị egwu, njem ụgbọ mmiri ahaziri iche. Medallion bụ ngwaọrụ nwere akụkụ anọ, nke a na-eyi eyi nke na-enyere ihe niile aka site na ịbanye na-enweghị mmetụ aka ịchọta ndị ọ hụrụ n'anya ebe ọ bụla n'ụgbọ mmiri, yana ịkwalite ọrụ dị ka ịnweta ndị ọbịa ọ bụla chọrọ, nyefere ha ozugbo, ebe ọ bụla ha nọ n'ụgbọ mmiri. Achọpụtala ya dị ka ngwaọrụ wearable kachasị elu na ụlọ ọrụ ile ọbịa zuru ụwa ọnụ.
Princess njem ụgbọ mmiri Ọdụ ụgbọ mmiri Emerald Princess dị maka ndị ọbịa natara ọgwụ ikpeazụ COVID-19 akwadoro opekata mpe ụbọchị 14 tupu mmalite njem ụgbọ mmiri ma nwee ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Ndị ọbịa niile nwere ọgwụ mgbochi ọrịa ga-enwerịrị nyocha COVID-19 (PCR ma ọ bụ antigen) nke elele anya ọgwụ ahụ n'ime ụbọchị abụọ nke ntinye ha na ụgbọ mmiri Princess niile. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dị ka ntuziaka CDC si dị.
Princess njem ụgbọ mmiri bụ ahịrị ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ njegharị na -arụ ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri iri na anọ nke oge a, na -eburu nde ọbịa abụọ kwa afọ gaa ebe 14 gburugburu ụwa, gụnyere Caribbean, Alaska, Panama Canal, Mexico Riviera, Europe, South America, Australia/ New Zealand, South Pacific, Hawaii, Asia, Canada/New England, Antarctica, na World Cruises.